40; Qof oo ku waashay Duqeynta ay Kenya ku heyso G. Gedo,Maqal | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - 40; Qof oo ku waashay Duqeynta ay Kenya ku heyso G. Gedo,Maqal
40; Qof oo ku waashay Duqeynta ay Kenya ku heyso G. Gedo,Maqal
April 20, 2017	20 Views
Muqdisho: Ciidanka Kenya ayaa wali duqeyn joogto ah ka wada Koofurta Soomaaliya iyaga oo sheegaya in ay dagal kula jiraan Al-shabaab,waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaarayaa dadka rayidka ah ee u badan xoola dhaqatada iyo Beeroleyda.
Ugu yaraan 40;ayaa la sheegayaa in ay ku waasheen duqeynta ay kenya ka fulineyso Koofurta Soomaaliya gaar ahaan Gobolka Gedo.
Habeenii xalay ahaa ayaa ugu dambeeyay duqeyn ay ka geysatay tuulooyin hoostada Degmada Ceel-Waaq ee Gobolka Gedo ayaa waxaa khasaare uu ka soo gaaray dad rayid ah iyo xoolihii ay lahaayeen.
Korneyl Aadan Maxamed Rufle oo ka tirsan Saraakiisha Dowladda ee Gobolka Gedo ayaa Idaacadda Mustaqbal u xaqiijiyay in 40; oo naxdinta ay ka qaadeen duqeynta Kenyaanku ka wadaan Gobolka ay hadda jiifaan Isbitaallada islamarkaana ay Kenya sii waddo waxyeeleynta shacabka iyaga oo ku doodaya in ay beegsanayaan AMISOM.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa bishii Julay ee Sanadkii tagay Howlgalka AMISOM dib u cusbooneysiiyay waxaana ay ku kordhiyeen diyaarado dagaal oo gaaraya ilaa 9 Nooca Helicopters-ka loo yaqaan hayeeshee Ciidamada ka socda Kenya iyo Itoobiya ayaa adeegsada Diyaaradaha dagaalka ee aan ahayn kuw aku jira howlgalka AMISOM.
WWAREYSIGA KORNEEYL AADAN MAXAMED RUFLE
Roberto Firmino oo bar-bareyay rikoor uu horay u dhigay George Weah. April 25, 2018
Mohamed Salah oo Taariikh cusub ka sameeyay Champions League. April 25, 2018
#Taliska #Burcadda Badda https://t.co/SNVNrqmDj7 4 hours ago
Taliska Booliiska Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay nin ay sheegeen in uu katirsan Daacishta Soomaaliya. https://t.co/Qnp8SqmJ1v 19 hours ago
Wasiirka Gaashaandhigga oo is casilay,isna diiwaangeliyay https://t.co/KfbyuRQLi3 23 hours ago
Roberto Firmino oo bar-bareyay rikoor uu horay u dhigay George Weah.
Mohamed Salah oo Taariikh cusub ka sameeyay Champions League.